BBC Somali - Ganacsi - Bangiga Salaam oo laan ka furay Boosaaso
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Febraayo, 2011, 18:46 GMT 21:46 SGA
Bangiga Salaam oo laan ka furay Boosaaso
Bangiga Salaama oo laga furayo Boosaaso
Bangiga Salaam ee islaamiga oo saldhigiisu yahay Djibouti ayaa laantiisii ugu horaysay ee Soomaliya uu ka furay Magaalada Bosaaso. Bangiga Salaam bank ayaa waxuu u qaban doonaa dadka adeegyo kala duwan oo la filayo inay wax badan ku soo kordhiyaan ganacsiga gobolka. Bangiga oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed iyo kuwo reer Djibouti waxaa laga furay Djibouti sanadkii 2009kii. Maareeyaha guud ee Bankiga Salaam ee Boosaaso Maxamed Jaamac Xaashi ayaa weriyaha BBCda Axmed M.Cali uga warramay adeegyada uu qabanayo bangiga Salaam.
Maalgashiga Soomaalida ee dalka Uganda ayaa sii kordhaya. Inta badan Soomaalida halkaas ganacsiga ku leh waa kuwo ka yimid dalalka reer Galbeedka, kuwo hore halkaas u degganaa iyo kuwo Soomaaliya ka yimid.
Yaxye Maxamed Cadow oo ahaa weriye Soomaaliyeed oo ka soo cararey dagaalada magaalada Muqdisho, ayaa ka mid ah ganacsatada magaalada Kampala ee dalka Uganda. Weriyaha BBC Daud Aweis ayaa halkaas kula kulmay.
Shiinaha iyo Kenya oo saxiixay heshiis
Amniga Rio ee Brazil oo la adkeeyay Dhimashada duqeymaha Isra'iil ee Qaza oo 100 gaartay